Shina: Tantara foronina voalohany @ Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Marsa 2010 9:14 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Filipino, Français, македонски, বাংলা, 日本語, English
Nilaza tao amin'ny bolongany i Lian Yue, mpampianatra teo aloha sady mpitsara ihany koa teo aloha fa efa mpamaham-bolongana malaza sy mpanadihady politika any Shina, fa hanomboka hanoratra tantara foronina iray mitondra ny lohateny hoe 2020 izy amin'ity volana ity. Araka ny nolazainy ihany moa dia tsy hifarana ity tantara ity raha tsy amin'ny taona 2020.
Ary rehefa miteny izany moa aho (ahitsio aho raha diso) dia ity no tantara shinoa noforonina voalohany mivoaka amin'ny Twitter. Matt Stewart no voalaza fa mpanoratra namoaka tantara noforonina lava voalohany tamin'ny Twitter izay nampitondrainy ny lohateny hoe, Ny Revolisiona Frantsay. Izany moa no nataony rehefa tsy nety nahita mpanonta hamoaka ny bokiny ‘mampididoza’ izy. Hafa kosa anefa ny antony nanosika an'i Lian Yue hanao toy izany. Izao no antony:
Tahaka ny mihirahira eo am-pandroana izy ity. Rehefa afa-boly iny ianao dia hampifaly tena; manana faniriana lalina hamorona sy hiteny ianao. Tsy tokony hivoaka ho hitan'ny besinimaro ny hirahira eo am-pandroana. Mety hijaly manko izay mahare izany. Fa tsy afa-mifehy ny tenany izany mampifaly ny tenany ao anatin'ny setroky ny fandroana ao.
Ao anatin'ny tontolo tena henjana kosa dia maty tsikelikely kosa izay famoronana izay. Mety ho azo avadika mora ho porofon-keloka ny fananan'ny voambolana hevitra mandray roa sy dika maro. Satria manko mitovy dika amin'ny famonoan-tena ny famoronana dia tsy misy ny miraikipo aminy manokana. Nihendanja ny voambolana ka lasa mitovy amin'ny tsikera sy fitsarana.
Mihamafana ny toetr'andro; tsy mila miakanjo matevina intsony isika. Mihamalefaka ny tany itsahina; azo tehirizina ny diatongotrao. Tahaka ny tsimoka mivoaka avy eo amin'ny lavaka. Eo amin'izay toerana izay dia miankina amin'ny fananan'ny voambolana hevitra mandray roa sy dika marony famoronana ahafahany mandositra ny fanamelohana sy miaro ny tenany ihany koa. Tahaka ny fitorianao fitiavana amin'olon-kafa ihany io ka tsy hahatsiaro menatra na dia lavina aza.
Na izany aza, tsy resa-pitiavana izy ity. Tsy misy mahalala hoe aiza nomisy ny fanindronana. Maratra ianao raha tsy mitandrina. Fa raha miteny ianao hoe mamo aho na adala dia hanimba ny fomba fieritreretana mahampanakanto. Very ny hery sy ny hasina nananan-dry Li Bai sy ry Huai Su [poeta Shina fahagola sady mpanao soratra an-tsary izay mampiavaka ny shinoa rahateo] raha nahasahy niteny hoe tsy mpisotro [ho mamo].
Eritrereto hoe misy olona torotoro sy voatery ho any anaty rano. Raha sempotra izy, saingy afaka misinton-drivotra hiaina dia ny hanao izay hiainana ihany no tena ikirizany. Fa raha afa-miaina tsara izy dia tsy eritreretiny akory ny hoe hifoka rivotra. Fialamboly hafa no hotadiaviny. Eo amin'ny twitter no ananako izany fahatsapana izany. Ao no fotoantsika izay mpamorona sy mpandray andraikitra.
Raha afa-mamaky teny shinoa moa ianao dia afa-manaraka ny tantara ao amin'ny twitter.com/lianyue (hashtag #ly2020).